Waxa la sheegay in xafiiska ururka dadka laxaadka la’a ee qaran ee qaybti oromiya in la xidhay – ዜና ከምንጩ
Xafiiska shaqalaha iyo arimaha bulshada ee deegaanka oromiya ayaa sheegay in ururka dadka laxaadka la’a ee qaran ee ku yiilay deegaanka oromiya in la xidhay.
Tekaaliny Bayisa oo ah madaxa xafiiska ururka dadka laxaadka la’a ee qaran ee degaanka oromiya ayaa sheegay in xafiiska shaqalaha iyo arimaha bulshada ee ee deeganka oromiya u usheegay in xafiiska ururkoodu aanu ka shaqayn doonin deegaanka oromiya.xafiiska ururka dadka laxaadka la’a ee qaran ee deegaanka oromiya oo 22 sano ka shaqaynayay deegaankaasi ayaa waxa xidhitaankiisa ka dhalatay dood, waxana la sheegay in xafiiskan oo ku yaalay magalada gima la jabsaday oo lagu wareejiyay kooxo kale.
Xafiiska shaqaalaha iyo arimaha bulshada ee deegaankaasi ayaa waraaqda u qoray waxa ku qoran in ururkaasi u iska soo wareegiyo xafiiska iyo in u ururkaasi ka dhaqdhaqaago deegaankaasi aan ogolaanshaha looga baahnayn federaalka.Tekaaliny oo addis maleda u waramay ayaa sheegay in u ururku ka xunyahay goa’ankan , sida oo kale ay ka hor yimaadeen shrcigii bayaanka u ku xaqiijiyay barlamaanka federaalku.
Sida u barlamaanak fedaraalku ku xaqiijiyay bayaanka tirsiga 1113/11 ayaa sheegaya in hayadaha samo falka ah ee etoobiya laga aasaaso waa in diwaan galinta wakaaladaha ururada federaalka fadhigoodu u noqdo oo guud ahaan dalka xafiisyo ururada ah laga furi doono loo sameeyo sharci ay ku dhaqmaan oo shaabad loogu dhufto oo ay helaan aqoonsi.
Ayda oo la tixraacayo sharcigaasi aayaa la assasay ururkan qaran oo u dalka oo dhan ka hawl galaa bu yidhi Tekaliny, sida oo kale xafiiskayagi oo nalaga xidhay awgeed dhaqdhaqaaqayagi hawleed ayaa caqabad nagu noqday.
Takaaliny waxa kale oo u sheegay in xafiiskaasi ku yaalay magalada gima ee la jabsaday ee alaabadoodi laga dhacay waa in sida ugu dhakhsaha badan na loogu furo, waxa waraaqdi la qoray bishi 2dii sane ee sanadka 2013kana lagu xusay in ururkan u yaha mid jira oo loo baahan yahay in xafiiska la furo.
Waxa kale oo u yidhi ficilkan lagu dhaqmay waa ficil ka hor imanaya xuquuqda dastuurku u siiyay 3 milyon oo dadka laxa’adka la’a ah. Maamulka xafiiska cabashooyinka ee muwaadinita ayaa waxa aan ka codsanayna in u fahmo dulmiga na loo gaystay oo u suaashayada ka jawaaba.
Waxa la ogsoonyahay in u ururkani ka hawlgalo qaybinta cawimada kursiga dadka laxaadka la’a, shaqo abuurka loo sameeyo dadka laxaadka la’a iyo in loo sameeyo meelo ay ku shaqaysan karaan.
Sharciga bayaanka 31 aad ee ku aadan in la kaalmeeyo dadka laxaadka la’a ee oromiya ayaa waxa ku xusan in xafiiska shaqaalaha iyo arimaha bulshada ee deegaanka oromiya looga baahan yahay in u kaalmeeyo dadka laxaadka la’a.
Waxa u Takaaliny yidhi halkii looga baahna in hawshaasi ay qabtaan ayaa inta la yidhi waa in qorshihiina aad kala tashataan xafiiska oo xafiiskayagi nalaga xidhay. In aanu xafiisyo kale furano oon hawshayada wadanona waxa nala hor dhigay caqabado, imika xafiiskayaga ku yaala dheera ayaanu hawlaha uga fulina dadka adeega u baahan.
Sida oo kale waxa u Takaaliny xusay in lagu yidhi dawlada federaalka in aanay khusaynin arimaha deegaanka oo loo diiday in ururku u ka dhaqdhaqaaqo deegaankaas.
Waxa aan tagnay maxkamada buu yidhi Tekaaliny maxkamaduna waxa ay noo sheegtay in sharcigu u noo ogolyahay oo aanu jirin sharci idiin diidaya in aad ka shaqysataan deegaankasi oo anaanu sharci daro ku socon,waxa kale oo ay noo sheegeen in aanu iskayo u heshiino, waxa sida oo kale u ururkani ka dhaqdhaqaaqo deegaanada kale oo dhan balse loo diiday in ay ka shaqeyaan deegaanka oromiya oo kaliya.
Waxa kale oo u faahfaahin ka bixiyay Tekaaliny in xafiiska shaqaalaha iyo arimaha bulshada ee deegaanka oromiya u sheegay in dib ay aqoonsigi ay ka eleen federaalka u celiyaan oo hadan si cusub ay u soo asaasan, hadna sida la sheegay in dib ay u soo asaasan sharci ka hadlaya ma jiro.
Waxa u intaasi raaciyay Tekaaliny hadii ogolaanshaha deegaanka ay ku shaqaysan lahaayeen waxa ay walaac ka qabaan in ay awwodi waayaan hawlaha ah in jibriga addis ababa ay ka soo xareeystaan sida gawaadhi bila canshuur ah iyo kuraasta dadka laxaadk la’a ee bila lacag ah.
In kasta oo u wargayska addis maleda u isku dayay in u tilifoon ku waraaysto shaqaalaha xafiiska shaqaalaha iyo arimaha bulshada ee deegaanka oromiya hadana tilifoonadi ayaa laga qaban waayay.
Total views : 6422148